ဘွဲ့ရ နှင့် ပညာ
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင်ဘွဲ့ရအများစုကို “ဘွဲ့ရပညာမတတ်”ဟူ၍ စွပ်စွဲပြောဆိုကြသည်။ ၁၄ နှစ်ခန့်အချိန်ကုန်လူပမ်းပြီး ကြိုးစားခဲ့သူများစွာကို ဘွဲ့ရသည့်အခါ သူတို့ကိုဘာကြောင့် ပညာမတတ်ဟု ဟူ၍ စွပ်စွဲပြောဆိုကြသနည်း။
လေ့လာဆန်းစစ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပညာကိုဘယ်လိုသင်ကြလဲ။ ဥရောပနိုင်ငံအများကို ကြည့်ရင် သူတို့ သည်မိခင်ဘာသာစကားဖြင့်သာစာသင်သည်ကိုတွေ့ရမည်။ ပြင်သစ်တွင် ပြင်သစ်ဘာသာရပ်ဖြင့် သာစာသင်သည်။ဂျာမနီတွင်ဂျာမာန်ဖြင့်စာသင်သည်။ အာရှနိုင်ငံများတွင်ကော။ ထိုင်းတွင်ဘာသာရပ် အားလုံးကိုထိုင်းလိုသင်သည်။ ထိုင်းတက္ကသိုလ်များတွင်ထိုင်းလိုပင်သင်သည်။
တရုတ်တွင်လည်းထို့အတူုဖြစ်သည်။ တရုတ်မှာတက္ကသိုလ်တက်ရင် ၉၉% သောကျောင်းတွေဟာ တရုတ်လိုပင်သင်သည်။ အင်တာနက်နှင့်ပတ်သက်၍ အားလုံးတရုတ်လိုကြည့်လို့ရသည်၊ ရှာလို့ရသည်။
ဂျပန်ကောဘာထူးသလဲ။ သူတို့တက္ကသိုလများတွင် ဂျပန်လိုပင်သင်သည်။ဂျပန်က အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားထားသော ထွက်သမျှစာအုပ်အားလုံးလိုလို ကိုဘာသာပြန်သည်။ ကိုးရီးယားတွင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့။ ဒီကောင်တွေအင်္ဂလိပ်စာညံ့သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်း မပြောတတ်ကြပါ။
Recommended for you - ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင် အလုပ်ခေါ်စာများနှင့် အလုပ်ရှာကြသူများ
နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်တလေ လမ်းပျောက်နေသည့်အခါ လာပြီး မေးလျှင်မဖြေရဲ။ ရှက်ရှက်နှင့် ထွက်ပြေးကြရသည်။ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယား၊ ထိုင်း၊ အားလုံးအင်္ဂလိပ်လိုညံ့သည်။ ထိုသို့ညံ့သည့် အကြောင်းကားသူတို့သည် ကျောင်းတွင် ဘာသာရပ်အားလုံးကို မိခင်ဘာသာစကား (mother Tongue) ဖြင့်သာသင်ယူကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့အင်္ဂလိပ်စာညံ့သည်မှာမှန်သော်လည်း သူတို့ ဘာသာရပ် ကိုကျွမ်းကျင်သည်။
ဂျပန်သည် တီထွင်မှု (innovation) များစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ကမ္ဘာတွင်အကောင်းဆုံးသော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင် အဏုမြူဗုံးအချခံရ၍ ပြာပုံဖြစ်ခဲ့ ရသော ဂျပန်ချမ်းသာသွားသည်။ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံဖြစ်သွားသည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ်လောက်တွင် ကိုးရီးယားသည် စပြီးချမ်းသာလာပါပြီ၊ ဆိုးလ်တွင် အိုလံပစ် ကျင်းပသည်။ ဒီမိုကရေစီကိုပြည့်ဝစွာအသုံးချနေကြသည်။ ယနေ့တောင်ကိုးရီးယားသည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီချမ်းသာတဲ့နီုင်ငံဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုးရီးယားမှထုတ်သော ဆမ်ဆောင်း ဖုန်းများ၊ မော်တော်ကား များသည် ကိုးရီးယားကိုအခြေခိုင်စေသည်။
တရုတ်ကိုတော့ပြောစရာမလိုပါ။ ယနေ့တရုတ်သည် ကမ္ဘာတွင် လူဦးရေအများဆုံးနီုင်ငံဖြစ်သလို ဒုတိယအချမ်းသာဆုံးနီုင်ငံဖြစ်နေလေပြီ။ အင်္ဂလိပ် စာတတ်သော တရုတ်များ နိုင်ငံရပ်ခြား ကပြန်လာကြသည်။ အင်္ဂလိပ်စာမတတ်သော တရုတ်များက နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သည်။ ဒီအတိုင်းပါပဲ၊ ထိုင်းကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီက လူသန်းဂဏန်း မဟုတ်ရင်တောင် သိန်းဂဏန်းပေါင်းများစွာ သည်ထိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်နေကြရသည်။ ထိုင်းအများစုသည်အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ ဆီအနိမ့်ဆုံးလစာကို တစ်နေ့ လေးထောင်ပြည့်အောင်မပေးနိုင်မီ ထိုင်းတွင် တစ်သောင်းပေးသည်။ ကိုးရီးယားတွင် ငါးသောင်းပေးသည်။ဂျပန်တွင်တစ်သိန်းပေးသည်။ သူတို့တွင် ပညာရေးကို မိခင်ဘာသာ ဖြင့်ပင်သင်သည်။
Recommended for you - သင်က ကြောက်တတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်လား ? ? ?
ဘယ်လိုစဖြစ်တာလ။ဲ ဒီအကြောင်းကို ဆွေးနွေးမိသည်။
“ကျွန်တော်တို့ဟာ ၁၉၈၁ ခုနှစ်ကစပြီးမူလတန်းကစလို့အင်္ဂလိပ်လိုသင်ဖို့ပြဌာန်းတယ်။၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာ ၉ တန်း၁၀ တန်းက စတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုသင်တယ်။ GCE 'O' Level အတိုင်းသင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။” “မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ကျောင်းတွေမှာအင်္ဂလိပ်လိုသင်တော့တာပေါ့” “ဟုတ်ပါတယ်။ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ သင်္ချာ၊ ဇီဝဗေဒ အားလူံးကိုအဂင်္ရလိပ်လိုသင်ပါတယ်” “သူတို့ကိုသင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကမူလက ဘယ်လို ဘွဲ့ရတာလဲ” “မြန်မာလိုပဲသင်ပြီးဘွဲ့ရတယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်လို သင်ဖို့ အခက်အခဲတွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟာ တစ်နေ့ တစ်ပအိုဒ်ချင်းဆီ ကျောင်းသားတွေကိုလာဖတ်ပြတယ်၊ တတ်သအမျှ မှတ်သမျှအဓိပ္ပါယ်ပြန်ပေးကြတယ်။”
“ကျောင်းသားတွေသဘောပေါက်တာပေါ့” “ပေါက်ကြသူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖြေရမယ်။ သူတို့မြန်မာလိုတတ်သိနားလည်နေပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြေရမယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုကျက်ရတာပေါ့” “ကိုယ့်စကားနဲ့ကိုယ်ရေးရင်ကော” “ ဒါဆိုရင် အမှတ်တွေနည်းကုန်မှာပေါ့။ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းကပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်နဲ့ ပေးတာ၊ အမှတ်နည်းရင် သူတို့တက်ချင်တဲ့တက္ကသိုလ်မတက်နိုင်တော့ဘူး” “သူတို့စာကျက်တာမမှာဘူးပေါ့” “မမှားဘူး။ ဒါပေမဲ့ စာတွေရပေမဲ့ပညာမတတ်တော့ဘူး၊ သူတို့ဟာ အတွေးဉာဏ်တွေရှင်သန်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့လို့ပဲ”
“ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကားနဲ့သင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့” “တရုတ်တရုတ်လိုသင်တယ်၊ ဂျပန်ဂျပန် လိုသင်တယ်၊ ကိုးရီးယားကိုးရီးယားလိုသင်ကြတယ်” “သူတို့တိုးတက်တယ်” “ကျွန်တော်တို့ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးသဘောထားပြောင်းဖို့လိုပြီထင်တယ်ဗျာ” “မြန်မာပြည်မှာမြန်မာလိုသင်တဲ့တစ်နေ့ ဘွဲ့ရရမရရ ပညာတတ်တွေများပြားလာမှာပါပဲ”
ကြှနျတျောတို့မွနျမာပွညျတှငျဘှဲ့ရအမြားစုကို “ဘှဲ့ရပညာမတတျ”ဟူ၍ စှပျစှဲပွောဆိုကွသညျ။ ၁၄ နှဈခနျ့အခြိနျကုနျလူပမျးပွီး ကွိုးစားခဲ့သူမြားစှာကို ဘှဲ့ရသညျ့အခါ သူတို့ကိုဘာကွောငျ့ ပညာမတတျဟု ဟူ၍ စှပျစှဲပွောဆိုကွသနညျး။
လလေ့ာဆနျးစဈမှုတဈခု ပွုလုပျခဲ့သညျ။ ပညာကိုဘယျလိုသငျကွလဲ။ ဥရောပနိုငျငံအမြားကို ကွညျ့ရငျ သူတို့ သညျမိခငျဘာသာစကားဖွငျ့သာစာသငျသညျကိုတှရေ့မညျ။ ပွငျသဈတှငျ ပွငျသဈဘာသာရပျဖွငျ့ သာစာသငျသညျ။ဂြာမနီတှငျဂြာမာနျဖွငျ့စာသငျသညျ။ အာရှနိုငျငံမြားတှငျကော။ ထိုငျးတှငျဘာသာရပျ အားလုံးကိုထိုငျးလိုသငျသညျ။ ထိုငျးတက်ကသိုလျမြားတှငျထိုငျးလိုပငျသငျသညျ။
တရုတျတှငျလညျးထို့အတူုဖွဈသညျ။ တရုတျမှာတက်ကသိုလျတကျရငျ ၉၉% သောကြောငျးတှဟော တရုတျလိုပငျသငျသညျ။ အငျတာနကျနှငျ့ပတျသကျ၍ အားလုံးတရုတျလိုကွညျ့လို့ရသညျ၊ ရှာလို့ရသညျ။
Recommended for you - ခွောကျပွဈကငျး သဲလဲစငျ အလုပျချေါစာမြားနှငျ့ အလုပျရှာကွသူမြား
ဂပြနျကောဘာထူးသလဲ။ သူတို့တက်ကသိုလမြားတှငျ ဂပြနျလိုပငျသငျသညျ။ဂပြနျက အင်ျဂလိပျလို ရေးသားထားသော ထှကျသမြှစာအုပျအားလုံးလိုလို ကိုဘာသာပွနျသညျ။ ကိုးရီးယားတှငျလညျးဒီလိုပဲပေါ့။ ဒီကောငျတှအေင်ျဂလိပျစာညံ့သညျ။ အင်ျဂလိပျစကားကောငျးကောငျး မပွောတတျကွပါ။
နိုငျငံခွားသားတဈယောကျတလေ လမျးပြောကျနသေညျ့အခါ လာပွီး မေးလြှငျမဖွရေဲ။ ရှကျရှကျနှငျ့ ထှကျပွေးကွရသညျ။ တရုတျ၊ ဂပြနျ၊ ကိုးရီးယား၊ ထိုငျး၊ အားလုံးအင်ျဂလိပျလိုညံ့သညျ။ ထိုသို့ညံ့သညျ့ အကွောငျးကားသူတို့သညျ ကြောငျးတှငျ ဘာသာရပျအားလုံးကို မိခငျဘာသာစကား (mother Tongue) ဖွငျ့သာသငျယူကွသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။ သူတို့အင်ျဂလိပျစာညံ့သညျမှာမှနျသျောလညျး သူတို့ ဘာသာရပျ ကိုကြှမျးကငျြသညျ။
ဂပြနျသညျ တီထှငျမှု (innovation) မြားစှာကို ပွုလုပျခဲ့သညျ။ သူတို့သညျ ကမ်ဘာတှငျအကောငျးဆုံးသော အီလကျထရှနျးနဈပစ်စညျးမြားကိုထုတျလုပျသညျ။ဒုတိယကမ်ဘာစဈတှငျ အဏုမွူဗုံးအခခြံရ၍ ပွာပုံဖွဈခဲ့ ရသော ဂပြနျခမျြးသာသှားသညျ။ဖှံ့ဖွိုးပွီးနိုငျငံဖွဈသှားသညျ။ ၁၉၈၈ခုနှဈလောကျတှငျ ကိုးရီးယားသညျ စပွီးခမျြးသာလာပါပွီ၊ ဆိုးလျတှငျ အိုလံပဈ ကငျြးပသညျ။ ဒီမိုကရစေီကိုပွညျ့ဝစှာအသုံးခနြကွေသညျ။ ယနတေ့ောငျကိုးရီးယားသညျ ကမ်ဘာ့အဆငျ့မီခမျြးသာတဲ့နီုငျငံဖွဈနပေါပွီ။ ကိုးရီးယားမှထုတျသော ဆမျဆောငျး ဖုနျးမြား၊ မျောတျောကား မြားသညျ ကိုးရီးယားကိုအခွခေိုငျစသေညျ။
တရုတျကိုတော့ပွောစရာမလိုပါ။ ယနတေ့ရုတျသညျ ကမ်ဘာတှငျ လူဦးရအေမြားဆုံးနီုငျငံဖွဈသလို ဒုတိယအခမျြးသာဆုံးနီုငျငံဖွဈနလေပွေီ။ အင်ျဂလိပျ စာတတျသော တရုတျမြား နိုငျငံရပျခွား ကပွနျလာကွသညျ။ အင်ျဂလိပျစာမတတျသော တရုတျမြားက နိုငျငံကိုအုပျခြုပျသညျ။ ဒီအတိုငျးပါပဲ၊ ထိုငျးကိုကွညျ့ပါ။ ကြှနျတျောတို့ဆီက လူသနျးဂဏနျး မဟုတျရငျတောငျ သိနျးဂဏနျးပေါငျးမြားစှာ သညျထိုငျးတှငျ အလုပျလုပျနကွေရသညျ။ ထိုငျးအမြားစုသညျအင်ျဂလိပျလိုမတတျပါ။ကြှနျတျောတို့ ဆီအနိမျ့ဆုံးလစာကို တဈနေ့ လေးထောငျပွညျ့အောငျမပေးနိုငျမီ ထိုငျးတှငျ တဈသောငျးပေးသညျ။ ကိုးရီးယားတှငျ ငါးသောငျးပေးသညျ။ဂပြနျတှငျတဈသိနျးပေးသညျ။ သူတို့တှငျ ပညာရေးကို မိခငျဘာသာ ဖွငျ့ပငျသငျသညျ။
Recommended for you - သငျက ကွောကျတတျတဲ့သူ တဈယောကျလား ? ? ?
ဘယျလိုစဖွဈတာလ။ဲ ဒီအကွောငျးကို ဆှေးနှေးမိသညျ။
“ကြှနျတျောတို့ဟာ ၁၉၈၁ ခုနှဈကစပွီးမူလတနျးကစလို့အင်ျဂလိပျလိုသငျဖို့ပွဌာနျးတယျ။၁၉၈၄ ခုနှဈမှာ ၉ တနျး၁၀ တနျးက စတှကေိုအင်ျဂလိပျလိုသငျတယျ။ GCE 'O' Level အတိုငျးသငျဖို့ဆုံးဖွတျတယျ။” “မွနျမာတဈပွညျလုံး ကြောငျးတှမှောအင်ျဂလိပျလိုသငျတော့တာပေါ့” “ဟုတျပါတယျ။ ဓာတုဗဒေ၊ ရူပဗဒေ၊ သခငြ်ျာ၊ ဇီဝဗဒေ အားလူံးကိုအဂင်ျရလိပျလိုသငျပါတယျ” “သူတို့ကိုသငျတဲ့ဆရာဆရာမတှကေမူလက ဘယျလို ဘှဲ့ရတာလဲ” “မွနျမာလိုပဲသငျပွီးဘှဲ့ရတယျသူတို့အင်ျဂလိပျလို သငျဖို့ အခကျအခဲတှရှေိတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ဟာ တဈနေ့ တဈပအိုဒျခငျြးဆီ ကြောငျးသားတှကေိုလာဖတျပွတယျ၊ တတျသအမြှ မှတျသမြှအဓိပ်ပါယျပွနျပေးကွတယျ။”
“ကြောငျးသားတှသေဘောပေါကျတာပေါ့” “ပေါကျကွသူတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒါတှကေိုအင်ျဂလိပျလိုဖွရေမယျ။ သူတို့မွနျမာလိုတတျသိနားလညျနပေမေဲ့ အင်ျဂလိပျလိုပဲဖွရေမယျဆိုတော့အင်ျဂလိပျလိုကကျြရတာပေါ့” “ကိုယျ့စကားနဲ့ကိုယျရေးရငျကော” “ ဒါဆိုရငျ အမှတျတှနေညျးကုနျမှာပေါ့။ အမှတျပေးစညျးမဉျြးကပွဋ်ဌာနျးစာအုပျနဲ့ ပေးတာ၊ အမှတျနညျးရငျ သူတို့တကျခငျြတဲ့တက်ကသိုလျမတကျနိုငျတော့ဘူး” “သူတို့စာကကျြတာမမှာဘူးပေါ့” “မမှားဘူး။ ဒါပမေဲ့ စာတှရေပမေဲ့ပညာမတတျတော့ဘူး၊ သူတို့ဟာ အတှေးဉာဏျတှရှေငျသနျဖို့ မဖွဈနိုငျတော့လို့ပဲ”
“ကိုယျ့မိခငျဘာသာစကားနဲ့သငျရငျပိုကောငျးတာပေါ့” “တရုတျတရုတျလိုသငျတယျ၊ ဂပြနျဂပြနျ လိုသငျတယျ၊ ကိုးရီးယားကိုးရီးယားလိုသငျကွတယျ” “သူတို့တိုးတကျတယျ” “ကြှနျတျောတို့ပညာရေးနဲ့ ပတျသကျပွီးသဘောထားပွောငျးဖို့လိုပွီထငျတယျဗြာ” “မွနျမာပွညျမှာမွနျမာလိုသငျတဲ့တဈနေ့ ဘှဲ့ရရမရရ ပညာတတျတှမြေားပွားလာမှာပါပဲ”
Read times Last modified on Friday, 27 December 2019 16:09